China C-ezimilise Powder Camera welding enemingxuma Kucingo olubiyele for Power Plants yoMvelisi kunye noMthengisi | Pro kocingo
Inkqubo yokuyilwa kwe-C yocingo olubiyeleyo locingo luyafana nolunye ucingo oludibeneyo. It is a uthango sentsimbi usebenzisa ucingo kwalenza welding kunye kuqala kwaye emva koko kufuneka ukugoba umatshini ukwenza C ezimilise phezulu. Amandla aphakamileyo kunye nothango oluqinileyo lwecingo kwaye lusetyenziswa ikakhulu njengezithintelo eziphezulu zokhuseleko.
PRO.FENCE ibonelela C-ezimilise welding ucingo wocingo yakhiwe ye galvanize wocingo panel kwaye yagqitywa umgubo ngokupheleleyo wawutyabeka. Oko kuyakukonyusa umhlwa kunye nokwandisa ixesha lokusetyenziswa. Sinikezela ngezixhobo zesayizi ezincinane endaweni enkulu enkulu ukonga iindleko kubathengi kunye nokubethela i-whiling kuqinisekisa ukusetyenziswa okungaguquguqukiyo. Ikwayinto ekhethwayo ngabathengi abaninzi eJapan kwaye isetyenziswa kakhulu kwinkqubo yokubiyela izityalo zelanga, izakhiwo zokuhlala, uluntu, iipaki, iindlela njl.
Ungayifumana ngokulula kwindawo yokuhlala, ekuhlaleni, kwiipaki zaseJapan kwaye zihlala zisetyenziselwa ukubiyela ngocingo lwezityalo zelanga.
Ucingo lweDia. 3000.6-5.0mm
Kugqityiwe: Powder camera (Mdaka, Mnyama, Mhlophe)
Olu cingo lubiyelweyo locingo lwenziwe ngocingo lwentsimbi kwaye lingenziwa ngokobude obahlukeneyo, izilinganisi ezahlukeneyo ukuhlangabezana neemfuno zesiza kunye nohlahlo-lwabiwo mali lweprojekthi.
Umphezulu wocingo ogqityiweyo kumgubo we-electrostatic wawutyabeka kunye ne-PRO.FENCE isebenzisa uphawu oludumileyo lweAkson ukuba umgubo we-powder uya kuthi ga kwi-150μm ubuncinci. Kwaye zonke izinto zokulinganisa ezifanayo zizinto ze-SUS304. Abo badlala indima ebalulekileyo kwi-anti-corrosion. ISIQINISEKISO SOKUBHALA akukho rusting ubuncinci iminyaka emi-6.
Ubume bokugoba kwesangqa ngaphezulu nasezantsi kwiphaneli yemeshini yokuxhathisa ukothuka kwangaphandle kunye nokwenza ucingo lubonakale luthandeka.
Egqithileyo China Factory Isakhelo Metal Logistics wocingo Roll Cage - Pro
Okulandelayo: E-ezimilise ngentsimbi ucingo wocingo olubiyele lwezakhiwo zokwakha